Amacwecwe esinyithi, iiNtsimbi ezingadibaniyo, umbhobho wentsimbi- uKunda
Sigxininisa ekuveliseni iipleyiti zensimbi ezinxibayo, imo yentsimbi enganyangekiyo, iipleyiti zentsimbi, iipleyiti zentsimbi ezinamandla aphezulu, iipleyiti zokudibanisa ezinganyangekiyo, iipleyiti zetanki, iipleyiti zeenqanawa zoxinzelelo oluphezulu, kunye neepleyiti zensimbi yenqanawa. Kaninzi
Ipleyiti yentsimbi yeCarbon, iphepha lekhabhoni yentsimbi, icarbon steel coil ICarbon yintsimbi enomxholo wekhabhoni ukuya kuthi ga kwi-2.1% ngokobunzima. Ukuqengqeleka okubandayo kweCarbon yensimbi yesinyithi esingaphantsi kwe-0.2-3mm, ukuqina okushushu kweCarbon plate 4mm ukuya kuthi ga kwi-115mm Q195 (ST33), Q215A, Q215B, Q235A, Q235B (SS400), Q235C, Q235D, Q255A ...
Iipleyiti zensimbi ezinganyangekiyo zibhekisa kwiimveliso zepleyiti ezikhethekileyo ezisetyenziswa phantsi kweemeko zokunxiba kwindawo enkulu. Okwangoku, iipleyiti zensimbi ezinxitywayo ezinganyangekiyo ziipleyiti ezenziwe ngentsimbi yekhabhoni ephantsi okanye intsimbi ephantsi enobunzima obuhle kunye neplastikhi ngokufaka iwelding nge-thick ...
Imozulu yentsimbi inokuvezwa emoyeni ngaphandle kokupeyinta. Iqala ukurusa ngendlela efanayo nentsimbi yesiqhelo. Kodwa kungekudala izinto ezifakelweyo kuyo zibangela ukuba umhlwa okhuselweyo wenziwe kakuhle, ngaloo ndlela ucinezela umhlwa. Imozulu yentsimbi yemozulu ibonisa ukumelana okuhle ...
I-Plate ye-Stainless Steel ine-surface egudileyo, iplastiki ephezulu, ubunzima kunye namandla oomatshini, kwaye iyamelana nokubola ngee-asidi, iigesi ze-alkaline, izisombululo kunye nezinye izinto. Yintsimbi ye-alloy ekungekho lula ukurusa, kodwa ayisiyi rusi kwaphela. Ipleyiti yesinyithi engenanto ibhekisa ...
ibar yentsimbi yesikwere ibha
carbon intsimbi bar ngeenxa
intsimbi engatyiwa ibha yesikwere
carbon intsimbi umbhobho isikwere
carbon intsimbi umbhobho ngeenxa zonke
Isitya esikhokelayo kufuneka sibe yi-4 ukuya kwi-5 mm ubukhulu ukukhusela kwimitha. Eyona nto iphambili kwipleyiti yokukhokela kukukhokela, umlinganiso wayo unzima, uxinano luphezulu; Ipleyiti ekhokelayo luhlobo lweplate eyenziwe kukucinezelwa kweengcibi zentsimbi eziphambili emva kokunyibilika. Inemisebenzi yokukhusela imitha, i-corrosio ...
Inokumelana okunamandla komhlwa, i-asidi kunye nealkali ukumelana, ukwakhiwa kwemeko-bume ye-asidi, ukhuselo lwemitha yonyango, iX-reyi, igumbi lokukhusela imitha ye-CT, ukonyuka, isambathiso sesandi kunye nezinye izinto ezininzi, kwaye yinto encinci yokukhusela imitha. Okuqhelekileyo ...
I-Aluminium yimeta emhlophe ekhanyayo kunye ne-meta elula, eyahlulahlulwe yangumxube wealuminium kunye nealuminium. Ngenxa yokuba i-ductility, kwaye ihlala yenziwe intonga, iphepha, imilo yebhanti. Inokwahlulwa ibe: ipleyiti yealuminium, ikhoyili, umcu, ityhubhu kunye nentonga. I-Aluminium ineempawu ezahlukeneyo ezintle, ke ine ...
Iimveliso Iindaba Ngathi Qhagamshelana nathi
Ukusebenza, kunye nokuthembeka
Siyi-arhente yeefektri zentsimbi edumileyo e-China.Singaba yi-100% yokuqinisekisa umgangatho wempahla yethu. Okwesibini: Sineziko lethu lokuqhubekeka, elinokunikezela ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso njengokugoba, ukuwelda, ipolishi, unyango lwe-rust, kwalenza. Nxibelelana neNgcali